Ireo ministra mamono ny fitondran-dRajaonarimampianina | Ny Valosoa Vaovao
Ireo ministra mamono ny fitondran-dRajaonarimampianina
Na inona na inona fanazavana ho entin’ny mpitondra HVM dia mazava amin’ny maro fa tetika sy fomba hanakanana ny Filoha Marc Ravalomanana tsy ho afaka hirotsaka hofidiana Filoham-pirenena ny dikan’ny zavatra ataon’ny Etamazaoro Politikan’ny fitondrana ankehitriny amin’ny Filoha Nasionalin’ny Tiako Madagasikara . Ireto avy ireo izay nampitenenina sy hampitenenina hisakana an’i Dada Rivo Rakotovao izay efa ministra, ny ministra Rolly Mercia, ny ministra Gilbert François, Maharante Jean de Dieu, Rasolo Elise. Raha ny tena marina anefa, mamono ny fitondrana HVM sy ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny ataon’izy ireo. Akory ny fahagagan’ny rehetra fa nofongarina indray ny raharaha 7 Febroary ka tamin’izany no nilazan’ny Ministra misahana ny Fitsarana Rasolo Elise fa manankery amin’ny Filoha Ravalomanana ny didy navoakan’ny Fitsarana momba iny raharaha iny, izay manameloka ny Filoha Ravalomanana hiasa anterivozona mandram-pahafaty . Efa im-polo kely no nitondra fanazavana milaza ny tsy mampitombina ny fanenjehana ny Filoha Ravalomanana momba ny raharaha 7 Febroary ny Mpisolo vava azy sy izy tenany manokana, fa ny mahagaga dia io fongarina io indray . Raha nanontaniana ny hevitry ny olom-pirenena izay sendra tafaresaka teny rehetra teny dia samy milaza fa fahatahorana ny Filoha Marc Ravalomanana amin’ny fifidianana ny famongarana ny resaka 7 Febroary . Tsapa mantsy tato anatin’ny volana maromaro izao fa ny vahoaka izay reraky ny fijaliana sy ny fahantrana mihitsy no mitady ny Filoha Marc Ravalomanana sy manana fanantenana aminy satria nahatsiaro tena ho voafitaka izany vahoaka izany ary tsy vitan’izay fa lasa manohana azy koa ny olona izay nanenjika azy tany aloha . Ny dikan’izany dia tsy Kandida tsotra fotsiny amin’izao ny Filoha Ravalomanana fa azo lazaina mihitsy hoe Kandidam-bahoaka . Tsotra ny resaka ! Mikoropaka ny HVM izay eo amin’ny fitondrana ankehitriny satria akaiky ny fifidianana dia tadiavina daholo ny zavatra rehetra hamelezana izany antsoina hoe Marc Ravalomanana izany .
Ny voamarika koa tato ho ato dia Ministra ao anaty Governemanta no miteny amin’ny mpampahalala vaovao ny fanenjehana ny Filoha Ravalomanana , anisan’izany ny Ministra misahana ny serasera izay nanome fampitandremana ny Filoha Ravalomanana , dia izao indray ny Ministra misahana ny Fitsarana , manginy fotsiny ireny olona nokaramaina nihogahoga tany Toliary ireny izay olona ao anaty fitondrana no tao ambadika . Fa iza tokoa moa no tsy mahalala ny momba ny resaka 7 Febroary sy ny endrim-pitsarana nentina nitsara izany raharaha izany izay nafainganina araka izay tratra hanamelohana ny Filoha Ravalomanana sady fitsarana tsy mahefa no nitsara iny raharaha iny. Tsy adala akory ny vahoaka ka tsy hahafantatra ny marina na tsy nianatra lalàna daholo aza ny Malagasy 25 Tapitrisa . Fa ny mahagaga dia tsy asiana resaka sady modiana fanina ny Alatsinany mainty izay namoizana ain’olona maro sy nisian’ny trano maro nodoran’ny sasany nanerana an’i Madagasikara ; fa nahoana raha notsaraina maimaika koa iny raharaha iny ka nosamborina daholo izay nandroba sy ny nanome baiko satria tsy tongatonga ny Lundi noir raha tsy nisy ireo atidoha nikotrika ? Sa tsy ampy ny fonja eto Madagasikara ? Tsotra ny tiana hambara ; Fitsarana miangatra no misy eto Madagasikara satria misy ny raharaha modiana fanina na sarontsaronana , ireny raharaha Claudine ireny ohatra raha tsy nitsangana ny Sendikan’ny Mpitsara dia mety tsy fantatra izay niafarany , ny Ministry ny Fitsarana tamin’izany koa nampiantso mpanao gazety tamin’ny 10 alina , ka inona no dikan’izany ? Ary ny Haute Cour de Justice mba aiza ho aiza ny fitsanganany ? Fa maninona no tsy mbola mitsangana hatramin’izao ? Ary misy lalàna ve araka ny Lalampanorenana afaka manenjika ny olona tomponandraikitra anisan’ny nahatonga ny tsy nahatafatsangana izany rafitra izany ? Dia mihevitra ve ny fitondrana HVM sy izay rehetra ao andamosiny fa hahalasa lavitra azy ireo sy hitiavan’ny vahoaka azy izao ataony izao ? Tsia avy hatrany ny valiny ! Tsy fantatry ny sasany angamba ilay fehezanteny hoe : « Ny fihevitro tsy fihevitrareo , ny lalako tsy lalanareo » izay azo adika koa hoe : « Ny fihevitro tsy fihevitry ny fitondrana tarihan’ny HVM , ny lalako tsy lalan’ny mpitondra an’i Madagasikara ankehitriny », sa ahoana hoy ianao ?